मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि वनगाडमा ५ करोड बढी वजेट पारित
सल्यान, ३ पौष ।
सल्यानको बनगाड कुपिण्डेमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५ करोड २३ लाख ९२ हजार रकम आएको छ । केही समय अघि बनगाड कुपिण्डेमा रोजगारिको लागि वजेट कम आएको भनेर नगरलाई स्थानीयले आलोचना समेत गरेका थिए । तर पछिल्लो चरणमा निकै ठुलो रकम निकासा भएको छ ।
सरकारी कार्यविधि अनुरुप कामकाज अघि बढ्ने र दोस्रो किस्तामा आउने कुरा आफुलाई जानकारी भएकोमा बाहिर हल्ला गरेपनि आफु ढुक्क भएको कुरा नगर रोजगार संयोजक भिम पुनको भनाई छ । पछिल्लो पटक सबै भन्दा वढि बनगाड कुपिण्डमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बजेट भित्रिएको छ । वडा १ देखि १२ वटै वडाहरुमा यो कार्यक्रम लागु हुने जनाएको छ । सबै भन्दा बढी वजेट १ नं. वडामा ५० लाख आएको छ भने कम १२ नं. वडामा ३९ लाख आएको छ ।
बाँकी अरु सबै वडाहरुमा ४४ लाख वेसि रकम आएको छ । विकासमा सामानुपातिक रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुने र वेरोजगारले काम पाउने नगर प्रमुख गोविन्द कुमार पुनको भनाई रहेको छ । यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो, यसलाई सबैले सहयोग गर्ने सफल बनाउन सबै पंक्तिको आवश्यकता पर्छ ।
यो महामारीको समयमा कामकाज विहिन नगरका नागरिक हरुका लागि पहिले नै वेरोजगार डाटा पठाएको त्यहि अनुरुप बजेट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आएको जनाएको छ । बजेट ल्याउने कुरामा सबैको साथ सहयोग पाएको बताएको छ । अघिल्लो निकासमा वजेट कम आएको आलोचना खेपिरहेका रोजगार संयोजक पुन भने यतिबेला खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
यसलाई अक्षरस कार्यनयनका दिशामा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको औंल्याउनु हुन्छ । बनगाड कुपिण्डेमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगारका लागि यतिधेरै वजेट आएको यो पहिलो पटक हो ।
वेरोजगार डाटा इन्ट्री भएको र पछिल्लो समयमा बजेट निकासा हुने जानकारी पहिल्यै देखि आफुलाई थाहा थियोे तर बेरोजगार संख्या बढी रहेको क्षेत्रमा यस अघि कम वजेट निकासले आम सर्वसाधारण नागरिकलाई केही खल्लोपना भएको रोजगार संयोजक पुनको स्विकारोक्ति छ ।
सबै प्राविधिक कारणवस र सिस्टमको खराबीले जिम्मेवार व्यक्तिलाई दोष आउनु स्वभाविक रहेको उहाँको भनाई छ । सबैको जोडवल र सहयोगले सबै वडामा समानुपातिक रुपमा मुख्यमन्त्री स्वरोजगार वजेट आएको जनाएको छ । घरघरमा रोजगारी भन्ने मुल मन्त्रलाई स्थापित गर्दै कोही पनि कामको खोजिमा नभौतारिउन भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो । कति सकिन्छ सकभर सबैलाई यो कार्यमा समाहित गर्ने नगरको मुल उदेश्य रहेको नगर प्रमुखको भनाई छ । यो कार्यक्रम यहि पौष १५ बाट कार्यनयन प्रक्रियामा जाने समेत बताएको छ ।